Atụmatụ maka Spotify ndenye aha i
E nwere ọnụ ọgụgụ nke na ndenye aha nchịkọta na e ẹkenam site na ụlọ ọrụ na ikwu na Spotify ọrụ ma ọtụtụ ọrụ ndị na-amaghị nke eziokwu na yiri teminoloji na-arụ ọrụ dị ka a na-akwọ ụgbọala ike. A nkuzi e dere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ihe ọmụma na nke a na-akawanye ihe mere na nri n'ụzọ na direction. A nkuzi bụ ihe niile banyere ọdịiche dị n'etiti ndị na ndebanye aha na e ulo oru site na ụlọ ọrụ na-ewusi ha ọrụ isi na nke kacha mma n'ụzọ.
Part 1. Spotify ndenye aha na ụdị na-iche
Part 2. Olee sirila Spotify ndenye aha?
Part 3. Olee ịkagbu Spotify ndenye aha?
Ka e kwuru tupu nakwa na e nwere ọnụ ọgụgụ nke na ndebanye aha na-nyere site na ụlọ ọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ na-pacified na ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a. Nke a na ngalaba nke nkuzi ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma amụọ na ikwu na ndebanye aha na e nyere ma na metụtara dị iche na-pụta ìhè na nke kacha mma n'ụzọ.
Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe dị iche na-e echiche mgbe ndebanye aha na-ọhụrụ nakwa dị ka iwere dị ka nke a ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma amụọ nakwa ọkọkpọhi ọkaibe ọrụ na ndabere nke a. Ihe dị iche e kọwara n'okpuru ebe n'ụzọ zuru ezu iji hụ na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-enweta mgbe ọ fọrọ nke nta ọ na-eri mgbe nile na mmefu ego na mmekọrita ọrụ a na-anọgide na akara na ihe ndị a chọrọ nke ọrụ.
Mgbe onye ọrụ ịrịba ama elu maka Spotify akaụntụ mgbe ahụ Spotify free bụ atụmatụ na e nyere ikike ndabara dị ka ọ bụ onye nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi free otu nke mbụ 7 ụbọchị na ọkọkpọhi ọrụ nwalere juputara Tupu ikpeazụ zuo mkpebi e mere. Ọ bụ ihe kasị mma na ọkaibe atụmatụ na e emejuputa atumatu site na ụlọ ọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ịzụta na-mezuo aka akwa ịgbatị. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ego na-availed zuru na ọrụ na-abụghị nanị na-eji ma mkpebi ikpeazụ na-mere.
Ọ bụkwa otu n'ime ndị ọrụ na-eme ka n'aka na ọ na-akwụ ụgwọ ndebanye aha na-enwe. Ihe dị iche bụ na ọrụ na-ahụ na ndị kasị mma na ala nke nkà atụmatụ na-agbakwunyere n'ime nke a na ndenye aha na-enwe na-a oké ịgbatị iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma N'ihi. Ọ na-na--ahụ kwuru na ọrụ kwesịrị ijide n'aka na na ndenye aha bụ naanị iwere bụrụ na onye ọrụ bụ n'ụzọ zuru ezu afọ ojuju. Na-eri nke nkwalite bụ $0.99 na zuru ndenye aha na ebubo na ọnụego nke $ 10 kwa ọnwa.
Ọ bụkwa a free ndenye aha na e ulo oru site na ụlọ ọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ọrụ n'efu ruo a oge nke 60 ụbọchị. Nanị ihe dị iche n'etiti free na ikpe na ndenye aha bụ na onye ọrụ iji inweta nzọ version mkpa ijide n'aka na na kaadị na-aha na nkọwa na-nyere na ụlọ ọrụ mere na ndebanye aha na-ọhụrụ enweghị ihe ọ bụla nke mgbe ikpe oge agwụ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ na-awa site na ụlọ ọrụ na-naanị ụtọ nke onye ọrụ maara nke functionalities na chọrọ inye a-agbalị na ndenye aha maka a ogologo oge nke oge.
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma nchịkọta na e ẹkenam n'oge gara aga na niile ndị ọrụ nwere ezigbo akpịrị ịkpọ nkụ nke music nwere ike denye aha iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-enwe na nke kacha mma n'ụzọ. Nke a na ndenye aha a na-chịrị si na-akparaghị ókè òtù gaghị ekwe sirila ya n'ihu. Ẹdude nchịkọta na-converted Spotify adịchaghị na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na niile na-akparaghị ókè nchịkọta na-converted adịchaghị ozugbo mmetụta.
Weghara a nnọọ nnukwu amụrụ ahịa ngwugwu a ẹkenam na ụmụ akwụkwọ na-a ego nke 50% maka ngụkọta adịchaghị ngwugwu eri ọ bụrụ na ha na e kwupụtara ọma. Ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere ndị kasị mma ngwugwu na ụmụ akwụkwọ ahụ na-eme n'aka na ọ na-abụghị nanị wee ma ndị ọrụ na-na-kacha mma n'ihi na ụlọ ọrụ revenue na-ụba. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ a ga-ya kwupụtara dị ka a na-amụrụ site na isoro URL https://spotify.sheerid.com/ na-arụpụta ihe kasị mma.
Nzọụkwụ bụ ezigbo mfe na-eso na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na n'okpuru kwuru usoro a emejuputa atumatu iji jide n'aka na nsonaazụ kacha mma na-enwetara na nke a:
Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ukara website nke ọrụ a gara na adịchaghị ndebanye aha na-ahọrọ:
Ugwo usoro a na-ahụ na-ahọrọ na ala:
The ọrụ na onye ga ahụ ga-esi a nnata:
Na ndenye aha taabụ na-ahụ na-pịrị:
Ọ bụ-ahụ kwuru na ndebanye aha na-ọhụrụ na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ ka n'aka na nzi ụgwọ na-emejuputa atumatu iji kaadị mgbe ahụ mgbanwe ugwo nkeji a ga-ahọrọ iji mezue usoro:
Na-esonụ bụ usoro a ga-etinyere na nke a na-arụpụta ihe kasị mma:
Mgbe egbu osisi n'ime akaụntụ onye ọrụ kwesịrị ka pịa aha njirimara:
Na ndenye aha taabụ na-ahụ na-pịrị n'ihu:
The ele m nhọrọ bụ na-ahọrọ n'okpuru nkụnye eji isi mee nke kagbuo m ndenye aha dị ka e gosiri n'okpuru:
The nhọrọ "Pịa ebe a iji nọgide na-ka a kagbuo page" bụ mgbe ahụ na-pịrị:
The akagbuo mere a na-ahụ na-ahọrọ ka n'ihu:
Onye ọrụ ahụ kwesịrị ịbanye paswọọdụ iji na-eme ka n'aka na ọ peeji na-esonụ na-egosi ebe taabụ nke "Kagbuo Spotify adịchaghị ndenye aha" a ga-ahọrọ:
Usoro e dechara na zuru na ndenye aha e kagbuo:
Atụmatụ banyere Open Spotify - Issues
> Resource> Spotify> Atụmatụ maka Spotify Ndenye aha